Iwo akanakisa emahara emahara mamaneja eGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Iwo akanakisa emahara emaemail mamaneja eGnu / Linux
Mawebhusaiti ekushandisa kana webapps chishandiso chikuru chakaita kuti vashandisi vazhinji varege kuisa mapurogiramu pakombuta yavo kuti vangoshandisa chete webhu browser. Asi izvi zvakakonzera kuti nezviito zvakapusa sekutarisa e-mail, komputa inodzora kana kumira sekuti haina kushanda. Mhinduro yeiyi ndeye kudzoka kune echinyakare kunyorera uye kuverenga iyo tsamba, zvakanakisa kusarudza maneja maneja unobatanidza kune desktop yedhisheni yedu yeGnu / Linux.
Ipapo tichaenda ratidza runyorwa rweakasiyana mamaneja mameseji kana emaimeri vatengi izvo zvichatibatsira kuverenga nekugadzirisa maemail edu zvakanaka pasina kuenda kune webhu saiti kuti tiite basa iri uye zvakare kuzvisunungura kubva kune zvinokanganisa.
4 Anocheka tsamba
9 Ndeupi maneja maneja ndiye akanakisa?
Mozilla Thunderbird mutengi wetsamba weMozilla Foundation. Mozilla Thunderbird ndeimwe yevatengi vekare tsamba vatengi varipo uye zvakare yeumwe wekutanga tsamba vatengi avo vakazvarwa kuitira kuti vayambuke-chikuva, kuvapo kweGnu / Linux kugoverwa, kwemacOS uye yeWindows.
Kubudirira kweMozilla Thunderbird hakusi kushanda zvakanyanya asi hakuregi kugadzikana, pane kudaro. Iyo ndeimwe yeanonyatsogadzikana mamaneja mameseji atinogona kuwana kudzora yedu email. Mozilla Thunderbird inotsigira ese makuru email maprotocol, anoti POP3, IMAP, uye Exchange.
Mukuwedzera kushandiswa kwekudya uye muverengi wechiitiko kunotenderwa kuburikidza nekarenda iyo Mozilla Thunderbird yakavakirwa-mukati. Mozilla Thunderbird maneja maneja iyo inobvumidza kunyorera kwemaemail sezvo ichitsigira PGP protocol uye mashandisiro ayo kune chero ruzivo rwatinotumira kuburikidza neSMTP port.
Uyu maneja wema mail akasiyana nevamwe mamaneja, inotsigira plugins uye zvinowedzera izvo zvichatibatsira kwete kungozvigadzirisa yeMozilla email mutengi asiwo kuwedzera mashandiro matsva kana kuwedzera izvo zvatova nazvo, senge zvinowedzera-zvekarenda kana mukana wekugadzirisa masocial network kubva kumaneja maneja.
Mozilla Thunderbird ndiyo yakanaka mamaneja maneja kune vashandisi avo Ivo vari kutsvaga multiplatform maneja kana ivo vanofanirwa kushanda nemaverengeka anoshanda masisitimu uye havadi kudzidza mashandiro evanoverengeka mamaneja mameseji.
MailSpring maneja anozivikanwa kwazvo weemail mumwedzi ichangopfuura. MailSpring maneja anochinja kubva kune ane mukurumbira Nylas N1. MailSpring inogumira kutumira uye kugamuchira maemail zvakanaka. MailSpring ine mawedzera-ons kana mamwe mabasa ayo anowanzo asiri ese mamaneja mameseji, sekuzivisa kwekuverengwa kweemail nemugashiri kana kuwedzera siginicha otomatiki nekutadza.
Imwe yemapoinzi asina kunaka eMailspring ndeyekuti iwe unoda account kuti ukwanise kushandisa maneja maneja. Iyi ndeyekambani, senge GMail, uye iyi ndiyo poindi yakaipa pachayo, kusiyana nemamwe mapurogiramu akaita seMozilla Thunderbird kana Evolution. Kubudirira kwepamusoro kwevatengi pamwe neayo aesthetics ndiwo mapoinzi akanaka eiyi email maneja.
Geary ndeye isingaremi email maneja iyo iri kana iri yakabatana neGnome 3 desktop. Kusiyana nevamwe mamaneja mameseji, Geary inongotsigira IMAP tsamba masevhisi, kunyange chiri chokwadi kuti ndiyo protocol inonyanya kushandiswa nhasi, ichokwadi zvakare kuti makambani anoshandisa masevhisi avo uye izvi hazvipindirane nemaneja wefaira uyu. Kana iri risiri dambudziko, Geary inopa kugona kugadzira maemail ane html mupepeti, Notices dzedesktop dzetsamba nyowani, inotsvaga injini yekutsvaga uye nekukurumidza uye, yekuvandudzwa kwekushongedza iyo inokwikwidza MailSpring.
Pfungwa dzisina kunaka dzeGeary ndiko kusakwanisa kuishandisa cnemamwe maprotocol kupfuura IMAP pamwe nekusapindirana kwayo nekushandiswa kwezvinhu zvitsva. Iyo poindi yakanaka ndeye kukurumidza kumisikidzwa kwemaemail account pamwe ne yakagadziridzwa uye yemazuva ano aesthetic.
Claws Mail ndeye maneja wekare asi ane simba email. Kunyangwe paine chinyakare chinongedzo, Claws Mail inopa zvese zvaungabvunze kubva kumaneja maneja: kubva pane yakapusa tsamba yekutsvaga kune kuiswa kwe rss kana kugadzirisa nema plugins.
Iko kuderera kweClaws Mail ndiko kuti inoshandisa maraibhurari ekare eGTK izvo zvinoita kuti kuita kwechirongwa kusanyanya sevamwe mamaneja mameseji.
Pfungwa yakanaka ndeyekuti inopa iwo mamwe masevhisi sevamwe mamaneja mameseji asi isingaremerure tsamba maneja Kana zvirinani hazvipedze zviwanikwa zvakawanda seMozilla Thunderbird kana MailSpring.
KDE Kube mutumira tsamba yakafanana neMailSpring. Iyo inopa mashandiro akafanana ekuverenga maemail uye akagadziridzwa pamatafura ane Qt maraibhurari. KDE Kube yakagoneswa neiyo KDE Project saka vazhinji vakaidaidza iyo yepamutemo mutsivi kuKMail, zvisinei hapana chepamutemo nezvazvo. KDE Kube ndeye isina kugadzikana asi inoshanda kwazvo email maneja, zvinoreva kuti haisati yaiswa mune chero kugoverwa, kunyangwe ichigona kuiswa uye kushandiswa.
Pfungwa yayo yakanaka ndeyayo kuenderana nemaraibhurari eQt uye nehukama hwavo zvine hukama. Pfungwa dzayo dzisina kunaka ndedze Kugadzikana izvo zvichiri kupa mune zvimwe zvinhu zvakare kudiwa kwekunyoresa nebasa rekunze kushandisa chirongwa chetsamba.
Evhangeri ndiyo maneja maneja par kugona kweGnome desktop uye pamatafura ese anoshandisa maraibhurari eGTK. Dzidziso yekushanduka-shanduka haina kuve nekushanduka kukuru mumakore achangopfuura, saka vashandisi vazhinji vanosarudza kuisa imwe tsamba maneja kuti vashandise Evolution. Nekudaro, ndeimwe yemamaneja akazara eemail aripo.
Izvo hazvipe chete zvinopa email encryption, rss kuverenga, kubatana nemakendendende, yepamusoro email kutsvaga, nezvimwe ... asi inosanganisika zvakakwana neiyo Gnome desktop, ichibatana nemaapplication ayo anoda kutumira maemail kana neGnome 3 account service.
El Positive poindi yeEvolution ndiko kugadzirwa kwainopa kune mushandisi, pakati pezvimwe zvinhu nekuda kwekubatanidzwa kwayo ne desktop.
Yayo yakaipa poindi iri mukati iyo yakanyanya kudyiswa zviwanikwa zvinoshandiswa neEvolution pamwe nehukama hwayo, iyo isina kuvandudzwa kwemakore.
KMail ndiyo Evolution's KDE imwe nzira. Ivo vanopa zvimwe zvakafanana chinhu asi KMail yakanangiswa uye inowirirana zvakanyanya nePlasma ne KDE nepo Evolution iri yeGnome. Pamusoro peayo aesthetics, KMail inosiyana neEvolution yekushanda kwayo kwakashata, mashandiro ayo kune vazhinji ave asingachashandi uye iyo inoda kuvandudzwa. Kunyangwe ndichifanira kubvuma kuti KMail inokumbira zvinopfuura izvo zvazvinopa, ichokwadi zvakare kuti iri rakanakira email maneja kune avo vanoshandisa Plasma uye havadi kuomesa hupenyu hwavo nemapurogiramu ekunze kudesktop.
Sylpheed maneja weemail uyo anozivikanwa nekuve mumwe weakanyanya(asi zvakanyanya) mashoma maemail mamaneja aripo. Sylpheed inongobata email, haitsigire plugins asi inotsigira maprotocol makuru ekuchengetedza aripo kunyorera email.
Iwo asina kunaka mapoinzi eSylpheed ndiwo ayo aesthetics uye maitiro ayo anoigadzira haina zvibereko kumushandisi. Izvi kana isu tichiregeredza kushayikwa kwezvishongedzo, zvinoshanda kana kubatana nematafura akakurumbira.
Yayo yakanaka poindi ndeyekuti inopa mhinduro ye yakajeka tsamba kubatwa, yakanakira zvikwata zvine zviwanikwa zvishoma.
Ndeupi maneja maneja ndiye akanakisa?
Kubva pane zvakaitika kwandiri nevatungamiriri vakasiyana-siyana vetsamba (ndinofunga ndakavashandisa vese munguva yangu naGnu / Linux), akanakisa ndiye maneja anoenderana newe. Izvo hazvina basa mashandiro, aesthetics kana manejimendi manejimendi, haina kana basa kana tikashandisa imwe desktop iyo isina hushamwari nemaneja maneja, kana isingaenderane nenzira yako yekushanda, kuverenga tsamba, iyo email maneja. tsamba haishande kana ichave yakaipa kupfuura mamwe mamaneja mameseji. Kana iwe uchiri kundibvunza kuti nei ndingasarudze maneja weemail webasa rangu rezuva nezuva kana remakomputa yangu, ndingangodaro ndasarudza Mozilla Thunderbird (Ini parizvino ndinoshandisa iyo webhurawuza kutarisa email yangu).
Uyu maneja manejimendi anoyera manejimendi manejimendi zvakanaka kwazvo zvine chekuita nekushanda. Iyo zvakare inopa mamwe mabasa ayo mamwe mapurogiramu asingaunze senge khalendari manejimendi kana feed feed uye zvakare ine nharaunda huru kumashure kwayo. Asi aya maonero ehukama, haafanire kuve anoshanda kune avo vane makore gumi nemashanu komputa kana kune avo vanokoshesa aesthetics kupfuura zvimwe zvese. Saka zvakanakisa ndizvo edza mamaneja ese emaema uye uzviongorore. Neraki, vese vakasununguka uye vanogona kuyedzwa pasina muripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iwo akanakisa emahara emaemail mamaneja eGnu / Linux
thumtherbird HAKUNA kubva kumozilla, haichisiri
Carlos Soto akadaro
Ndinoda kupa kushoropodza kunovaka, ini ndinogara ndichiverenga zvinyorwa kana zvinyorwa zvinoti zvishanu zvakanakisa, iwo gumi akanakisa mapurogiramu eGNU / Linux, kana Windows, uye ini ndinogara ndichiona chinhu chimwe chete icho, kopi peji rechinyorwa kubva kuna 5 kana Makore mashanu apfuura akagadzirwa uye havatombo shandura iyo mifananidzo, vanoshandisa zvakafanana kubva pakutanga, ndosaka Linux isiri kuparadzirwa zvakanaka, nekuti basa rakachena uye rakaringana harisi kuitwa mukuparadzira mabhenefiti uye mhando idzo Linux ine sisitimu yekushandisa, uye akasiyana mapurogiramu aripo erudzi urwu rweOS. huwandu hwakawanda hwemapositi hunotaura nekutaura vachidzokorora kunge maparoti chimwe chinhu chavakaona kana kuverenga uye vachiramba vachichiita, chiva chepakutanga uye chinogadzira uye voita chimwe chinhu chevanyori uye nechinangwa
Pindura Carlos Soto